‘अस्ट्रेलिया जाने पैसाले ट्याक्सी किनेँ’ – Online Nepal
‘अस्ट्रेलिया जाने पैसाले ट्याक्सी किनेँ’
March 15, 2020 1422
मेरो घर रामेछाप हो। अहिले परिवारसित भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बस्छु। ट्याक्सी चलाउन थालेको पाँच वर्ष भयो। यसअघि काठमाडौँ, सुन्धारा बस्ने गरेको थिएँ। काठमाडौँमा बसेको बेला फुटपाथमा कपडा बेच्ने काम गर्थें। तीन वर्षजति त्यो काम गरेँ। चितवन, पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, हेटौंडा गएर पनि कपडा बेच्ने काम गरँे। फुटपाथमा पसल थाप्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले धेरै दुःख दिन्थे। लखेट्ने गर्थे। सामान लिएर भाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर यो कामले जीवन चलाउन सकिएलाजस्तो लागेन।
त्यसपछि दुई वर्ष थांका लेख्ने काम गरें। थांका लेख्ने काम पनि आफूलाई फाप्लाजस्तो लागेन। विदेश जाऊँ कि भन्ने लाग्यो। अस्ट्रेलिया जान अप्लाई गरेँ। अस्ट्रेलिया पठाउने अफिसले पनि आजभोलि भन्दै चार महिना झुलायो। दुई लाख रुपैयाँ त्यसै डुब्यो। त्यसपछि सोचेँ, अस्ट्रेलिया जान १४–१५ लाख रुपैयाँ लाग्छ। त्यसको सट्टा बरु यहीँ पाँचछ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर केही गर्छु भन्न लाग्यो। त्यसपछि ड्राइभिङ सिकेँ। त्यतिबेला घरमा बोलेरो गाडी थियो। त्यही चलाएँ। पछि ऋण गरेर ट्याक्सी किनेँ। अहिले त्यही ट्याक्सी चलाउँदै छु। सहचालक भएर काम गरिएन। सीधै चालक भइयो।
पहिला काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाएँ। अहिले भक्तपुरमा चलाउँछु। यहाँ पनि प्राइभेट गाडीले प्यासेन्जर उठाइदिन्छन्। गाह्रो छ गरिखान। कोठा भाडा, बच्चाको स्कुलको फिस तिर्न हम्मेहम्मे पर्छ।
पैसा नदिने, मिटरमा जान नमान्ने, मोलमोलाइ गर्ने प्यासेन्जरले साह्रै दुःख दिन्छन्। बाटोघाटोको समस्या नि त्यस्तै छ। मेन रोड चाहिँ राम्रो छ। भित्रभित्र त पहिलाको जस्तै खाल्डाखुल्डी छन्। महिनाको २५ दिनजति काम गरिन्छ। बाँकी समय परिवारसँग बिताउँछु। खान–लाउन काम गर्नु परिहाल्यो। विदेशमा गए पनि धेरै कमाए ५०–६० हजार रुपैयाँ कमाइने हो। यहाँ पनि महिनाको ३०–४० हजारजति त कमाइन्छ मज्जाले। विदेश नगएर ठीकै गरेछु भन्ने लाग्छ अहिले। प्रस्तुतिः रेणु अन्नपूर्ण पोस्ट
Prev१० वर्ष र १५ महिनाका दुई छोराहरु काखबाट खोसेर, छोरहरुकै अघि यसरि भयो आमा बिन्दाको ‘ह’त्या (भिडियोसहित)
Nextकोरनाबाट कसैको निधन नहोस भन्दै, रोनाल्डोले आफ्नै होटललाई अस्पताल बनाए !
२ दिन अघि कोरोना सङ्क्रमित महिलाको शव जलाएपछि विद्युतीय शवदाह गृहमा आयो यस्तो समस्या !
काठमाडौं – राजधानीमा लागु भयो यस्तो नियम!
दशैंको मुखमा लकडाउन गर्ने नगर्ने बारे भर्खरै यस्ता संकेत बाहिरियो
भक्तपुरमा मध्य रातमा कार टुक्रा हुदा बितेकी महिला अर्कै ड्राइभरकी पत्नी रहिछन, इन्जीनियरले लगेका थिए-भिडियो हेर्नुहोस
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62021)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51029)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45347)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43342)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37984)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29170)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27836)